Baradho macaan iyo jiis croquettes | Bezzia
Baradho macaan iyo jiis croquettes
Maria vazquez | 27/04/2021 10:00 | Bilow
Markii aan aragnay kuwan baradho macaan iyo jiis croquettes ee profile ka ah nafaqada-nafaqada Raquel Bernacer waan ogayn inaan ku diyaarinayno guriga. Kadibna waxaan la kulannaa dhibaatada caadiga ah: Ma haysto wax ku filan tan ama sida caadiga ah uma isticmaalo walaxdaas jikada ... laakiin wax waliba waxay leeyihiin xal!
Croquettes-kaani uma baahna diyaarinta dhicis ay u isticmaalaan sida kuwii hore. Cajiinka waxaa loo diyaariyey iyadoo la isku darayo hilib baradho macaan, jiis, kareem iyo gelatin, iyo waxyaabo kale. Jelly? Waad iska deyn kartaa laakiin sidee ayaad waqti ugu heli doontaa inaad hubiso cajiinka ma fududa in la maareeyo xitaa isticmaalkeeda.
Xilliga la sameynayo croquettes waa kan ugu jilicsan. Sameynta cajiinka waa mid aad u fudud, laakiin ka dib marka aad ku dhaafto qaboojiyaha, waa waqtigii la diyaarin lahaa croquettes. Mana awoodi doontid inaad kuwan ku qaabeeysid gacmahaaga, sida kuwii hore. Waxaad u baahan doontaa laba qaado iyo xoogaa dulqaad ah si aad u sameyso. Hadda isaga dhadhan macaan iyo midab dufan leh ee croquettes in ka badan ka dhigi iyada u.
385 g. hilib baradho macaan dubay (1 baradho macaan oo weyn)
1 xaashi gelatin dhexdhexaad ah
60 ml. kareem leh 35% dufan
Qaado yar oo subag ah
55 g mozzarella jiis (la jarjarey oo si fiican u daadiyey)
Diga baradhada macaan. Si tan loo sameeyo, kuleyli foornada ilaa 200ºC, baradhada macaan si fiican u maydh oo ku qalaji dusha sare ee foornada oo saliid saytuun ah lagu kariyey. Dub 45 daqiiqo ama ilaa intaad dhammeyso. Ka dib ka qaad foornada oo ha qaboojiso.
Markay qabowdo, waxay siisaa gelatin baaquli biyo diirran dhowr daqiiqo.
Isla mar ahaantaana, kareemka ku kululee digsi adigoon u oggolaan inuu karkariyo. Markaad kululaato, ka qaad kuleylka, ku dar gelatin iskuna qas ilaa ay kala go'do oo lagu daro.
Marka baradhada macaan ay diiran tahay, saar saxarka kuna rid lacagta la tilmaamay baaquli, kuna shiida fargeeto.
Ku dar subagga dhalaalay, kareemka leh gelatin, farmaajo iyo xilli dhadhamin. Si fiican isku qas, isku day haddii ay dhacdo inaad saxdo barta cusbada oo aad geliso qaboojiyaha muddo saacad ah, adigoo ku daboolaya baaquli weelka balaastigga ah.
Waqtigu wuu dhaafay, sameysmaan croquettes adoo adeegsanaya laba qaado. Ka dib si tartiib ah ugu rogo iyaga oo bur ah, ukumo la garaacay, iyo jajabkii rootiga. Ku rid qaboojiyaha saacad kale ka hor intaadan shiilin.
Finalmente shiil ku kari shiidaal saliid badan kuleylka kuleylka, adoo u oggolaanaya dufanka xad-dhaafka ah inuu ku daadiyo warqad wax nuugaysa intaad ka saarayso.
Ku darso baradhada macaan ee kulul iyo jiis croquettes.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Recipes » Bilow » Baradho macaan iyo jiis croquettes